Gabriel Martínez: ahịa ndị kachasị elu na Amazon na Onye Na-egbu ọchụ nke Milky Way | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ana Lena Rivera Muniz | | Ajụjụ ọnụ
Tiahuanaco, Bolivia. Ga njem na ide ihe so na otu agụụ. Akwụkwọ ọgụgụ bụ njem mgbe niile
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere taa na blọọgụ anyị Gabriel Martínez, Alicante, 1952, onye njem na-enweghị ike, nke Jose Luis Borges na-enweghị nkwenye, yana akwụkwọ akụkọ itoolu bipụtara, ha niile nọ na Amazon, otu n'ime ha, The Milky Way Killer, Amazon top sales and La Estirpe del Cóndor, Finalist maka 2014 Azorín Novel Award.
Gabriel Martinez: Ga njem na ide ihe so na otu agụụ. Akwụkwọ ọgụgụ bụ njem mgbe niile, mmadụ na kọntinent. Ọdịdị mmadụ bụ otu ihe na ọdịbendị ọ bụla, mana ọ bụghị naanị site na mmetụta na mmetụ na-edozi onye edemede; Ọzọkwa nke ụda, na-esi isi, ụtọ na agba. Ọ bụrụ n’otu akụkọ ma ọ bụ agwa ga - ejedebe gị n ’akwụkwọ mgbe ị na - eme njem, jidere gị.
AL: Kedu mgbe ị malitere ide?
GM:Mgbe m dị afọ asatọ ma ọ bụ itoolu, amalitere m ịme obere akụkọ, mana anaghị m eji ya egwu egwu ruo mgbe, mgbe m gbachara alụkwaghịm, na mgbe ụmụ m bidoro fewe naanị ha, ekpebiri m ịhapụ ihe niile iji rara onwe m nye ide.
AL: akwụkwọ akụkọ 9 nke e bipụtara, otu n'ime ha, Milky Way Killer, nnukwu mmeri ahịa na Amazon, ụlọ ahịa azụmaahịa kachasị ukwuu n'ụwa, ọzọ, La Estirpe del Cóndor, Finalist for the 2014 Azorín Novel Prize, mana Gabriel Martínez na-aga n'ihu Ọ bụ mkpebi nke ya ka ọ bụ na ọ siri ike nnukwu onye nkwusa ịre onye ode akwụkwọ akwụkwọ?
GM: M nwere atọ okokụre akwụkwọ akụkọ na drawer; otu n’ime ha, nke Comandante Roncal riri nke anọ, mana ọ dị ka akwụkwọ akụkọ m enweghị mmasị n’ebe ndị nkwusa nọ, ma ndị ukwu ma ndị nta. M ga-abụrịrị onye na-egosi telivishọn ka onye nkwusa wee nwee mmasị na m. Echere m na mgbe m kwụsịrị, m ga-akwụsị bulite ha na ikpo okwu dijitalụ, n'ihi na akwụkwọ akụkọ enweghị isi ma ọ bụrụ na ọ rughị ebe ọ na-aga, nke bụ ndị na-agụ ya.
Ndị: Ohi izu ohi ọ na-ewute gị?
GM: Amaara m na na weebụsaịtị na mba dị iche iche, a na-enye ọtụtụ akwụkwọ akụkọ m n'efu na PDF na ụdị ndị ọzọ. Amaghị m mkpụrụ ole ka ebudatara n'ụzọ ahụ, mana m na-atụ egwu na ịchụso nke "ngụkọta nnwere onwe" na-eme ka ịpụ apụ apụ.
AL: Afọ ole na ole gara aga, ị hapụrụ ọrụ gị iji rara onwe gị nye akwụkwọ. Can nwere ike ibi ndụ site na ịde akwụkwọ?
GM: Ọ dịghị ma ọlị. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-eme ya.
AL: Agaghị m agwa gị ka ị họrọ n'etiti akwụkwọ akụkọ gị, kama kama n'etiti ndị ode akwụkwọ kachasị amasị gị.Ọ bụrụ na gị na ndị ode akwụkwọ atọ nọrọ, kedụ ndị ha ga-abụ? Gịnị ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị akwụkwọ atọ?
GM: Enwere ọtụtụ ndị edemede na-amasị m, mana ọ bụrụ na m ga-ahọrọ atọ, ha ga-abụrịrị Borges, Dostoyevski na nke mbụ Vargas Llosa. Akwụkwọ atọ ndị ahụ ga-akpọga m n'àgwàetiti dị n'ọzara, The Aleph, The Player, and Conversation in the Katidral.
AL: altern na-agbanwe n'etiti ụdị na ntọala dị iche iche na akwụkwọ akụkọ gị: Na Los 52 ị na-ebuga anyị agha obodo, na Sherlock Holmes Club ị na-ama jijiji na Illuminati, na The Line of the Condor anyị banyere Alaeze Inca, na South nke Oran anyị na-abanye na nnwere onwe nke Algeria, na Akwụkwọ ozi nke Babilọn, ị na-eduga anyị na Istanbul mgbe aghụghọ ezinụlọ gasịrị, obodo nke pụtakwara na fim mbụ, mụ onwe m nke na-adịghị ebi na-enweghị gị na n'etiti ihe a niile, Anyị na-ahụ akwụkwọ akụkọ mpụ na ụdị dịkarịsịrị kpochapụwo, nke ọchịagha Roncal gụrụ, Is nwere eriri njikọ dị n'etiti ha niile? Kedu ụdị ndị na-agụ akwụkwọ gị ji ahọrọ gị?
GM: Ajuju a, kedu njikọ dị n'etiti akwụkwọ akụkọ m? Ajụrụ m onwe m n'oge ụfọdụ, ma o sighi ike ịchọta azịza ya: echiche nke dị anya na-enye. Ebe dị anya nke na-enye ndị edemede ohere ileghachi anya n’emeghị iwe. O doro anya na ndị niile na-ede akwụkwọ akụkọ m na-ahapụ gburugburu ha ma gaa ebe dị anya iji ghọta onwe ha nke ọma na ịnagide ihe ịma aka nke, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na-agbanwe ndụ ha. Ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ m na-arapara n'akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, mana o doro anya na ọtụtụ na-ahọrọ akwụkwọ akụkọ mpụ m.
Gabriel Martínez: Akwụkwọ akụkọ banyere akụkọ ihe mere eme edere na ala. Thebes. Ijipt.
AL: enter banyere ndị omekome na ndị nche obodo dị ka onye na-akwado ya, na-apụ site n'ụdị ụdị a: Ndị uwe ojii, ndị nchọpụta nzuzo, ndị ọka iwu, ọbụlagodi amụma, Lorenzo Silva na Gabriel Martínez, ole na ole n'ime gị nwere ike ịhọrọ Benemérita protagonists. Gịnị Mere O Ji Ghabe Nchebe Obodo? A ga-enwekwu ihe ọchị ọchịagha Roncal?
GM:Họrọ Roncal dị ka onye protagonist abụghị usoro maara ihe. Mgbe ụfọdụ, m na-eche na, dị ka akụkọ, ọ bụ ya họọrọ m ime ka ọ dị ndụ. Nke a Mgbe m kwusịrị nke anọ nke ọchịagha Roncal, "The Codex nke Barcelona" na m na-eche na mgbe Codex gasịrị, a ga-enwe ọtụtụ akụkọ Roncal ndị ọzọ.
AL: Ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ omume ọ bụla mgbe ị na-ede? Onye ga-egosi ọrụ gị tupu ịhapụ ya ka ha hụ ìhè?
GM: Iji dee Achọrọ m oge, ịnọrọ onwe m na ịgbachi nkịtị. Kwa ụbọchị, m na-agụgharị ihe e dere n’ụbọchị gara aga ma mezie nkọwa, ahịrịokwu ma ọ bụ paragraf niile. Achọrọ m ịmasị ya dị ka onye na-agụ akwụkwọ tupu mụ anabata ya.
Mgbe m gụchara akwụkwọ, m ga-enyefe ndị enyi m ihe odide ahụ iji nweta echiche ha, mana ekwesịrị m ikweta na onye kachasị nkatọ m (yabụ nke kachasị mma) bụ nwa m nwanyị Andrea.
AL: Kedu ka mmekọrịta gị na netwọkụ mmekọrịta dị? Hà na-enyere onye edemede ahụ aka ka ya na ndị na-agụ ya na-akpakọrịta ma ọ bụ na ha bụ oke ọhịa nke na-eme ka ndọpụ uche?
GM: Kpamkpam ọjọọ. Enwere m mmasị na nzaghachi sitere n'aka ndị na-agụ akwụkwọ, ma ọ bụrụ na achọtara m ọwa naanị maka ya, m ga-achọ ya, mana enweghị m mmasị na mkpofu nke Facebook ma ọ bụ Twitter.
AL: Akwụkwọ gị kachasị ọhụrụ, Las Putas de Nuestra Señora de la Candelaria bipụtara na 2015. Gịnị bụ ọrụ gị ọzọ?
GM: Na mgbakwunye na akwụkwọ akụkọ atọ agwụla rue oge mbipụta, m ka dechara edemede nkiri. Ugbu a, m na-ede akwụkwọ na-atọ ụtọ na Mexico.
GM: Ma, maka ihe dị iche iche. Mgbe m zụrụ akwụkwọ, ihe mbụ m na-eme bụ imepe peeji ya ka ọ nụ ya, ọ bụ ihe ịtụnanya magburu onwe ya nke m na-enweghị ike ịchọ ma achọghị ime. Ọ bụkwa onyinye magburu onwe ya maka onwe gị ma ọ bụ ndị ọzọ. Mana maka ihe bara uru na, karịa ihe niile, ebumnuche obibi obibi, usoro dijitalụ dị ka ịnọ.
AL: Kedu ka ị ga-esi akọwa ụdị gị, mmetụta gị? Kedu ka akwụkwọ akụkọ gị si daba na ọha mmadụ taa?
GM: Onye edemede a esighi na obodo o bi na ya, gaa na omenaala ya. N'echiche a, m na-ekwuputa na m ji ụgwọ ihe nkiri. Tupu m bụrụ onye edemede, abụ m onye na - agụ akwụkwọ, ọbụnadị tupu onye nkiri nkiri (telivishọn mechara bia ka ọ mara akara nke ya), yabụ, enweghị mgbanwe, akwụkwọ akụkọ m niile na - esonye na akụkọ cinematographic. Ha bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọhụụ, na-enweghị nkwụsịtụ, ma nwee ụda olu ha. N'ime akwụkwọ akụkọ m, ị nwere ike ịnụ olu Norah Jones, Concha Piquer ma ọ bụ Billie Holiday, na "Las putas de Nuestra Señora de la Candelaria" ọ bụ reggaeton, egwu a na-ege mgbe niile, nke na-eme ka ụda nke ihe a na-eme.
AL: Na mmechi, aga m ajụ gị ajụjụ kachasị mkpa onye edemede nwere ike ịjụ: Gini mere iji dee?
GM: Enweghị azịza ọ bụla nye ajụjụ ahụ, mana enwere m ike ịgwa gị na m na-edekarị n'ihi na ọ na-atọ m ụtọ ịme ya. Na mgbakwunye, enwere ihe anwansi na otu esi eji okwu, dị ka brik maka onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ị nwere ike iwu ụlọ ahụ bụ akwụkwọ akụkọ. Borges kwuru na:
“N’ime ngwá ọrụ nile nke mmadụ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na akwụkwọ ahụ. Ndị ọzọ bụ mgbatị ahụ gị. Mikroskopu, telescope, bu ihe anya gi hu; ekwentị bụ ndọtị nke olu; mgbe ahụ anyị nwere mma na mma agha, ndọtị nke ogwe aka. Ma akwụkwọ bụ ihe ọzọ: akwụkwọ bụ ndọtị nke na ebe nchekwa na pụrụ ichetụ n'echiche "
Daalụ Gabriel Martínez, anyị na-atụ anya itinye aka anyị na ntinye ọhụụ nke ọchịagha Roncal na ịhụ ihe nkiri a ga-eme ka ọ dị ndụ site na edemede ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ nke Gabriel Martínez, onye edemede nke El Asesino de la Vía Láctea.
Akwụkwọ kacha ere ahịa na akụkọ ntolite